ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: ဂုဏ်ပြုထိုက်သူ လူသားတဦး
သူသက်ရှိ ထင်ရှားရှိစဉ်က ကျနော်မမွေးသေး။ အရွယ်ရောက်လာချိန်အထိလည်း သူ့အကြောင်းဘာမှမသိ။ သူက ကျနော်တို့ရပ်ကွက်မြို့ထဲကလည်းမဟုတ်။ ဗမာပြည်သားလည်းမဟုတ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူ့အကြောင်း သိဖို့မရှိခဲ့။ ဒီလိုနဲ့ တက္ကသိုလ်ရောက် ၈၈ အရေးတော်ပုံကြီး ပါဝင်ဆင်နွှဲလိုက်ချိန်မှာ သူ့အကြောင်းကို နောင်တော်တယောက်ပြောအရ သိခဲ့ရတယ်။ သူပြောပြသလောက်ထက် ဘာမှပိုမသိခဲ့ရ။ ပြီး တော့ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နေခဲ့လိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဦးနေဝင်း ခြိမ်းခြောက်၊ ဦးစိန်လွင် သတ်ဖြတ်။ နောက် ဗိုလ်စောမောင် အကြမ်းပွဲနဲ့ ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်ရန်စက်ကွင်းမှရှောင်ရှားရင် တောကြီးမျက်မဲထဲရောက်။ နောက် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆော့၊ ဘန်ကောက် တို့မှာ အဖမ်းကြမ်းတဲ့ ထိုင်းရဲလက်မှ အပြေးအလွှားခိုလှုံပုန်းရှောင်နေချိန်ကာလမှာ သူ့နဲ့ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ သတင်းစာ ဆောင်းပါးလေးတပုဒ်ကို တနေကုန် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်လှန်ပြီး သူဘယ်သူဘယ်ဝါ၊ ဘယ်နိုင်ငံသား၊ ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာတွေကို နားလည်းအောင်ကြိုးစားခဲ့ပြီး သူ့အကြောင်းသိချင်စိတ်တွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။
သူ့အကြောင်း ပိုသိလာလေ ပိုနှစ်သက်လေးစားကြည်ညိုးစိတ်တွေ တိုးပွားလာလေဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူကတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ မွေးဖွား၊ သူ့လူမျိုးစု မတရား ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုအောက်မှ လွတ်မြောက်ရေး၊ သာတူညီမျှ ရရှိရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး စတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး၊ အသား အရောင် ခွဲခြားတိုက်ဖျက်ရေးတို့ကို တိုက်ပွဲဝင်ရင် ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းမဖက်အရေးတော်ပုံသမား ဒေါက်တာမာတင်လူသားကင်း ~ ဂျူနီယာ (Martin Luther King, Jr.) ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို သူကလည်း သူလူမျိုး အနွယ်အဖွားများရဲ့  သူရဲကောင်း၊ လွတ်လပ်ရေးကျေးဇူးရှင်ကြီး တယောက်ဖြစ်တယ်။ သူ့လူမျိုးတွေရဲ့  လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲက ကျနော်တို့ မြန်မာပြည် အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန်ဖက်စစ် ကိုလိုနီဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်က လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲထက် ကြာရှည်ခဲ့တယ်။ အမေရိကန်ပြည် ထောင်စုအနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီလက်အောက်မှ ၁၇၇၆ ခုနှစ်ကတည်းက လွတ်မြောက်လာခဲ့ပေမယ့် မြောက်အမေရိကတိုက် စတင်ရှာဖွေ တွေ့ရှိချိန်ကတည်းက အာဖရိကတိုက်မှ အဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ယူလာခဲ့တဲ့ လူမဲကျေးကျွန်များဖြစ်တဲ့ သူ့နွယ်ဖွားများကတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ လူဖြူများရဲ့  ဆက်လက် ကျွန်ပြု၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုအောက်မှာ ဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့ကြရတယ်။
လူဖြူများရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုအောက်မှာ နှစ်ပေါင်းလေးရာကျော် လူသားတဦးအဖြစ် အပြည့်အဝမနေခဲ့ရတဲ့ သူ့လူမျိုးလွတ်မြောက် ရေး အတွက် ရှေ့ က ခေတ်အဆက်ဆက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ လူမဲခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ ဖက်ဒရစ် ဒေါက်ကလပ်စ် (Frederick Douglass), ဒဗလူး အီ ဘီ ဒူး ဘွိုင့်စ် (W. E. B. Du Bois) တို့လို လူမဲလူမျိုးစုများနဲ့ အသားအရောင်ကွဲပြားမှုအရ ခွဲခြားခံထားရတဲ့ လူမျိုးစုများလွတ်မြောက်ရေးကို သူဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။
ဂျော်ဂျီယားပြည်နယ် (Georgia) အတ္တလန်တာမြို့  (Atlanta) မှာ ဖခင် ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာတော် မာတင်လူသားကင်း ဆီနီယာ (Martin Luther King, Sr.) နဲ့ မိခင် အဲလ်ဘာတာ ဝီလီယံ ကင်း (Alberta Williams King) တို့မှ ၁၉၂၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ဖွားမြင်ခဲ့တယ်။ အမတယောက်နဲ့ ညီငယ်တယောက် သူမှာရှိတယ်။ အတ္တလန်တာမြို့ ရှိ ထင်ရှားတဲ့ ဘရုတ်ကာတီ ဝါရှင်တန် (Booker T. Washington) အထက်တန်းကျောင်းမှာ ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်။ ကိုးတန်းနဲ့ ဆယ့်နှစ် တန်းကို မတက်ရဘဲ အသက် (၁၅) နှစ်မှာ လူမဲများအတွက် ပထမဦးဆုံး ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တဲ့ မိုဟော့စ်ကောလိပ် (Morehouse College) ကို တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ အစောပိုင်းမှာ ဖခင်လိုပဲ ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်ဖို့အတွက် (အဲဒီကာလမှာ လူမဲများအတွက် တခြား ဘာ သာရပ်များသင်ကြားခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားတာကြောင့် အများစုမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးဆိုင်ရာ (Theological Seminary) ဘာသာရပ် တွေကိုသာ သင်ကြားခွင့်ရှိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပန်ဆဲလ်ဗီးနီးယားပြည်နယ် ဘာသာရေးကျောင်းတွေမှာ တက်ရောက်ပညာသင်ကြားပြီး ၁၉၅၁ ခုနှစ်မှာ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ ရရှိခဲ့တယ်။ ၁၉၅၃ မှာ ကိုရီတာ စကော့ထ် (Coretta Scott) နဲ့ လက်ထပ်ထမ်းမြားခဲ့ပြီး သားသမီး (၄) ယောက်ရရှိခဲ့တယ်။ အသက် (၂၅) နှစ်မှာ အလ်ဘားမားပြည်နယ်၊ မောက်ဂိုမာရီမြို့ ရှိ ဒက်စ်တာ ရိပ်သာလမ်း ပရိုတက်စတင်အသင်းတော်ဝင် ခရစ်ယာန်ကျောင်း (Dexter Avenue Baptist Church) ရဲ့ တရားဟောသင်းအုပ်ဆရာဖြစ်လာခဲ့တယ်။ တချိန်တည်းမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လေ့ လာမှုကို ဆက်လက်သင်ကြားပြီး ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ် (Boston University) မှ ပါရဂူဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပြီး ဒေါက်တာမာတင်လူသားကင်း ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အစောပိုင်းမှာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများမှာ တက်ကြွစွာဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိသေးဘဲ ဘာသာရေးဆိုင်ရာများကိုသာ ဇောက်ချလေ့လာ၊ ပို့ချလုပ်ကိုင်နေခဲ့တဲ့ ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာကောင်းတယောက်သာဖြစ်ဖို့ စိတ်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ မိုဟော့စ်ကောလိပ်မှာ တက်ရောက်စဉ်ကာလမှာ သူ့ဖခင်ကြီး၏မိတ်ဆွေ လူ့အခွင့်အရေးသမား၊ ဘာသာရေးဆရာ ဟားဝက်သာ မန် (Howard Thurman ရဲ့  စောင့်ရှောက် လမ်းညွှန်သင်ပြပေးမှုကို ရရှိခဲ့ပြီး၊ မစ္စတာသာမန်က အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ခရစ်ယာန်သာသနာပြု သွားရောက်တုန်းကတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး၊ အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းရေးသမားကြီး မဟတ္တမဂန္ဒီအကြောင်းကို မိတ် ဆက်ပြောဆိုခဲ့တယ်။ မစ္စတာသာမန်နဲ့ မာတင်လူသားကင်း ဆက်သွယ်မှုအမြဲ ရှိခဲ့ပြီး မဟတ္တမဂန္ဒီရဲ့  အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပြီး ၁၉၅၉ ခုနှစ်မှာ မဟတ္တမဂန္ဒီကြီး မွေးဇာတိကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့တယ်။ အိန္ဒိယကပြန်လည်မထွက်ခွာခင် ညနေပိုင်းစကားပြောပွဲမှာ “အိန္ဒိယမှာရောက်ရှိနေချိန်အတွင်း ကျနော်အနေနဲ့ အကြမ်းမဖက်တော်လှန်လှုပ်ရှားမှု နည်းဗျူဟာနဲ့ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူလူထု လွတ်မြောက်ရေး၊ လူဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ တရားမျှတစွာနေနိုင်ရေးလုပ်ဆောင်ဖို့ အရင်ကထက် ပိုမိုသက်ဝင်ယုံကြည်လက်ခံ လာခဲ့ တယ်” လို့ ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြင့် သူ့၏ အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းစွာလှုပ်ရှားမှုအကြောင်း နားလည်လာမှုကို ဖော်ထုတ်ပြသလိုက်တယ်။
ဒီကာလအတွင်းမှာ အလ်ဘားမားပြည်နယ်၊ မောက်ဂိုမားရီမြို့ မှာ လူမဲအမျိုးသမီးများဖြစ်ကြတဲ့ ကလူဒက်တီ ကော်ဗင် (Claudette Colvin) နဲ့ ရိုဇာပက်စ် (Rosa Parks) တို့ ဘတ်စ်ကားအတွင်း လူဖြူများ ထိုင်ခုံနေရာမှာဝင်ထိုင်ပြီး လူဖြူများအား ထိုင်ခွင့်မဖယ်ရှားပေးလို့ ဖမ်းဆီး ခံရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူမဲများ ဘတ်စ်ကားမစီးရေး သပိတ်မှောက်တိုက်ပွဲမှာ လူထုသင်းအုပ်ဆရာတယောက်အနေနဲ့ ဦးဆောင်ပါဝင်လာခဲ့ တယ်။ ရက်ပေါင်း (၃၈၅) ရက် ကာရှည်ခဲ့တဲ့ သပိတ်မှောက်ပွဲကာလအတွင်း လူဖြူအစွန်းရောက်များက မာတင်လူသားကင်းအိမ်ကို ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ မိသားစုဝင် တဦးတယောက်မှ သေဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ အာဏာပိုင်များက ရပ်ရွာမငြိမ်မသက် လှုံဆော်မှုပြစ်မှုဆိုင်ရာနဲ့ သူ့ကို ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပေမယ့် ဘတ်စ်ကားများအတွင်း လူဖြူ၊ လူမဲ ခွဲခြားဆက်ဆံရေး ဥပဒေကို ဖယ်ရှားဖျက်သိမ်းပေးခဲ့တယ်။
၁၉၅၇ ခုနှစ်မှာ မာတင်လူသားကင်းနဲ့ အသားအရောင်ခွဲခြားတိုက်ဖျက်ရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစုစည်းပြီး တောင်ပိုင်း ခရစ်ယာန်ခေါင်း ဆောင်များ ညီလာခံ (Southern Christian Leadership Conference) အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီအဖွဲ့ရဲ့ပင်မဦးတည်ချက်၊ ရည်ရွယ် ချက်မှာ လူမဲခရစ်ယာန်ကျောင်းများမှာ အသားအရောင်ခွဲခြားမှု တိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက် အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းစွာလှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်ရေး နည်းဗျူဟာဆိုင်ရာများကို သင်ကြားပို့ချသွားရေးအတွက် ဖြစ်တယ်။ မာတင်လူသားကင်းကို အသင်းကြီးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တညီတညွှတ်တည်း ရွေးချယ်တင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။
၁၉၅၈ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ သူ့ရေးသာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ချီတက်ကြစို့ (StrideToward Freedom) စာအုပ်ကို နယူးရော့ခ် ဟာလမ်ရပ်ကွက် စာအုပ်ဆိုင်တဆိုင်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးနေတုန်း စိတ်မနှံ့ရှာသူ လူမဲအမျိုးသမီးက အနီးကပ် စာဖွင့်ဓါးချွန်နဲ့ ရင်ဘတ်ကိုထိုးချက်ကြောင့် သေမလိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ သူ့ရဲ့ အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှုအရှိန်အဟုန် မြင့်တက်လာပြီး တောင်ပိုင်း ပြည်နယ်များတလျှောက် ကျယ်ပြန့်လာချိန်မှာ အမေရိကန် အထူးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ (FBI) က သူ့အိမ်၊ ရုံးဖုန်းများကို ကြားဖြတ်နားထောင် မှုများပြုလုပ်လာခဲ့တယ်။ အမေရိကန်အထူးထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲ ဂျေအက်ဂါဟူးဗား (J Edgar Hoover) က မာတင်လူသားကင်း တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကို ကွန်မြူနစ်များဝင်ရောက်အားပေးနေကြောင်း စွပ်စွဲပြောဆိုပြီး လူမဲခေါင်းဆောင်အများစုကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်၊ ဖျောက် ဖျက်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ မာတင်လူသားကင်းရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုဖယ်ရှားလိုတဲ့အတွက် မဟုတ်မမှန်သတင်းများ ဖန်တီးထုတ်ပြန်မှု များကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့။
မာတင် လူသားကင်း၏ ဦးဆောင်မှုနဲ့ လှုပ်ရှားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲများကို သတင်းမီဒီယာများက တင်ပြဖော်ပြမှုများကြောင့် တောင်ပိုင်းပြည်နယ်များမက တခြားပြည်နယ်ဒေသများသို့ သတင်းပျံ့နှံ့သွားခဲ့တယ်။ အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှု များနဲ့ လူမဲများ မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်၊ ခွဲခြားဆက်ဆံရေး ပပျောက်ရေး၊ တန်တူ အလုပ်သမား လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေး တောင်းဆိုမှုတိုက်ပွဲများကို ဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။ ဒီ တောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုများကြောင့် အမေရိကန်အစိုးရလွှတ်တော်မှ လူမဲများ မဲပေးပိုင်ခွင့်ဥပဒေနဲ့ တခြား အခွင့်အရေးများကို အတည်ပြုပေးခဲ့တယ်။ ဒီကာလအတွင်းမှာ မကြာခဏ အထိန်းသိမ်းခံရပြီး၊ အကျဉ်းကျခံနေချိန်အတွင်း ရေးသားခဲ့တဲ့ ဘာမင်ဟန်အကျဉ်းထောင်တွင်းမှ ပေးစာ (Letter fromaBirmingham Jail) က ထင်ရှား ဖတ်မှတ်လေ့လာသင့်တဲ့ မှတ်တမ်းစာအဖြစ် ထင်ရှားခဲ့တယ်။ ဘာမင်ဟန်နဲ့ တောင်ပိုင်းပြည်နယ်များ လှုပ်ရှားမှုများ အရှိန်အဟုန်မြင့်မားလာချိန်မှာ တခြားပြည်နယ်ဒေသရှိ လူ့အခွင့် အရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး ဝါရှင်တန်မြို့တော်ချီတက်ပွဲ (March on Washington) ကို ၁၉၆၃ ခုနှစ်မှာ ဦးဆောင်စည်းရုံး လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီသမိုင်းဝင်ချီတက်ပွဲကို အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ လူမဲခေါင်းဆောင်များ၊ အသားအရောင် ခွဲခြားတိုက်ဖျက်ရေးကို ဆန့်ကျင် ကြတဲ့ လူဖြူ ခေါင်းဆောင်များ၊ အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းမှ ထင်ရှားတဲ့ ဒါရိုက်တာ၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်များ ဖြစ်ကြတဲ့ (Marian Anderson; Joan Baez; Bob Dylan; Mahalia Jackson; Peter, Paul, and Mary; and Josh White. Charlton Heston—representingacontingent of artists, including Harry Belafonte, Marlon Brando, Diahann Carroll, Ossie Davis, Sammy Davis Jr., Lena Horne, Paul Newman, and Sidney Poitier) တို့နဲ့ ပြည်သူလူထု နှစ်သိန်းငါးသောင်းကျော် ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ ထိပ်တန်းမှတ်တမ်းပြုတင်ရစ်ခဲ့တဲ့ I haveadream မိန့်ခွန်းကိုပြောဆိုခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာသူများနဲ့ သတင်းပေးပို့ချက်များမှ မိန့်ခွန်းနား ထောင်ရသူများရဲ့ တခဲနက်ထောက်ခံ အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ရရှိခဲ့တော့တယ်။
ဒီနောက်ပိုင်း ထင်ရှားတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတခုက ၁၉၆၅ ခုနှစ် မတ်လ (၇) ရက်နေ့မှာ အလ်ဘားမားပြည်နယ် ဆဲမာမြို့  (Selma) မှ မောက်ဂိုမာရီမြို့ တော်ကို လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့်များအတွက် ဒေါက်တာကင်းမပါဝင်တဲ့ အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားသူ (၆၀၀) ခန့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်း လမ်းလျှောက်ပွဲမှာ လူဖြူအာဏာပိုင်များ နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဆန္ဒပြသူအများအပြား ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ သွေးချောင်းစီးခဲ့တဲ့နေ့ ဖြစ်တယ်။ ဒေါက်တာကင်းအနေနဲ့ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၏ အကြမ်းဖက်တားမြစ်မှုကိုရှုတ်ချပြီး သူကိုယ်တိုင် ဒုတိယအကြိမ်နဲ့ တတိအကြိမ်တို့ကိုဦးဆောင်ပြီး အာဏာပိုင် စစ်တပ်၊ ပြည်နယ်တပ်ဖွဲ့၊ အထူးထောက်လှမ်းရေးအင်အားတပ်ဖွဲ့များ တားမြစ် ပိတ်ပင်ထားတဲ့ကြားမှ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ မြို့ တော်ကို အရောက်ချီတက်နိုင်ခဲ့တယ်။ မြို့ တော်ကို အောင်မြင်စွာ ချီတက်ရောက်ရှိပြီးနောက် အစိုးရရုံးစိုက် မြို့ တော်ခန်းမရှေ့ မှာ “How Long, Not Long” မိန့်ခွန်းကို ပြောဆိုခဲ့တယ်။ မှတ်သားဖွယ်ပြောဆိုချက်တခုမှာ “သူတို့တတွေက ပြောတယ် ကျနော်တို့ ဒီနေရာကို မရောက်စေရဘူးတဲ့။ တချို့ ကလည်းပြောကြတယ်။ ကျနော်တတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေပဲ ဒီနေရာကို ရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ အခု ကျနော်တို့ ဒီနေရာကို ရောက်ရှိလာတာကို တကမ္ဘာလုံး မြင်ကြပါပြီ။ ကျနော်တို့တတွေ သြဇာတိက္ကမ ကြီးမားလှတဲ့ အလ်ဘားမားပြည်နယ်အစိုးရရုံးရှေ့ရပ်ပြီးပြောချင်တာကတော့ ကျနော်တို့တတွေကို ဘယ်သူဘယ်ဝါမှ နောက်ပြန်လှည့်သွား အောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး” ဆိုတဲ့ ပြောဆိုကောက်နုတ်ချက်ဖြစ်တယ်။
တောင်ပိုင်းဒေသများမှာ အောင်မြင်မှုများရရှိလာပြီးနောက်ပိုင်း ဒေါက်တာကင်းနဲ့ အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့အစည်းများ အမေရိကန် မြောက်ပိုင်းဒေသများကို သွားရောက်စည်းရုံးလှုံဆော်ခဲ့ကြတယ်။ မြောက်ပိုင်းဒေသ ပထမဦးဆုံးမြို့တော်မှာ ချီကာဂိုမြို့ (Chicago) ဖြစ် တယ်။ ချီကာဂိုမြို့ မှာ ရုံးခန်းတခန်းဖွင့်ပြီး ဒေသခံ ကွန်မြူနီတီအဖွဲ့အစည်းတခုနဲ့ ပူးတွဲပြီး စီတန်းလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြပွဲများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လူဖြူလူမဲ တန်းတူညီတူအခွင့်အရေးများကို တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြို့ခံများ၏ ပူးပေါင်းထောက်ခံမှုမရရှိဘဲ အကြမ်းဖက်တိုက် ခိုက်မှုများနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတယ်။ တခုသော ဆန္ဒပြပွဲမှ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ကြသူ လူဖြူတစု၏လက်ချက်ကြောင့် ဒေါက်တာကင်း မျက် နှာ အုတ်ခဲကျိုးတခုထိမှန်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်။ တချိန်တည်းမှာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု ခြိမ်းခြောက်စာများကို ရရှိခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး တက်ကြွတဲ့ မြို့ ခံ လူမဲ လူငယ်ခေါင်းဆောင်များကို တာဝန်လွှဲအပ်ပြီး တခြားပြည်နယ်ဒေသများသို့ သွားရောက်ခဲ့တယ်။
အဲဒီကာလအတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးကို တရှိန်ထိုးဆန့်ကျင်လုပ်ကိုင်နေပြီး အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဗီယက်နမ်ကို တိုက်ခိုက်နေချိန် ဖြစ်တယ်။ ဒေါက်တာကင်းအနေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကိုဆန့်ကျင်သူပီပီ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံအရေး ဝင်ရောက်စွက်ဖက်၊ တိုက်ခိုက်နေမှုကို အပြင်းအထန်ရှုတ်ချပြီး၊ အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ မိမိနိုင်ငံအတွင်းမှာ ဖြစ် ပျက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများကို ဖြေရှင်းလုပ်ကိုင်သွားဖို့လိုကြောင်း၊ အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ ငွေကြေး ကုန်ကျ၊ လူပေါင်းများစွာ သေကြေပျက်စီး၊ လူမဆန်၊ အဓိပ္ပါယ်မဲ့စစ်ပွဲကို အမြန်ဆုံးရပ်စဲဖို့ စစ်ဆန့်ကျင်ရေး လူထုဆန္ဒပြပွဲများကို တက် ရောက်ပြောဆိုခဲ့သလို၊ စာဆောင်းပါးများရေးပြီး သူ့၏ စစ်ဆန့်ကျင်ရေး ရပ်တည်ယုံကြည်ချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်။ အမေရိကန် အစိုးရ အာဏာပိုင်တချို့နဲ့ မီဒီယာတချို့က ဒေါက်တာကင်းအနေနဲ့ ကွန်မြူနစ် ဗီယက်နမ်ကာကွယ်ရေးသမား၊ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလို့ စွပ်စွဲပြောဆိုကြတယ်။ လူသားအားလုံး တန်တူညီတူ လူ့အခွင့်အရေးရရှိရေးအတွက် အကြမ်းမဖက်ငြိမ်းချမ်းရေးနည်းနဲ့ တိုက်ပွဲဝင် လှုပ်ရှား ခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာကင်းကို ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကြီးက ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှာ ချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။
၁၉၆၈ နှစ်ကာလမှာ ဆင်းရဲသားလူထုအတွက် စည်းရုံးလှုံဆော်မှု လူထုဆန္ဒပြပွဲများကို ဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီနဲ့ မြောက်ပိုင်းဒေသ မြို့ နယ်များကို သွားရောက်ပြီး ဆင်းရဲသားလူထုများအား အစိုးရအနေနဲ့ ထောက်ပံ့ကူညီ စောင့်ရှောက်လုပ်ကိုင်ပေးသွားရန် တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့တယ်။ နေ့ညရက်ဆက် တမြို့ဝင် တမြို့ထွက် နိုင်ငံတဝှမ်း လူမဲနဲ့ အသားအရောင်ခွဲခြားမှုခံနေရတဲ့ လူမျိုးစုများ ဖိနှိပ်မှုအောက်မှ လွတ်မြောက်ရေး၊ တန်တူအခွင့်အရေးများ ရရှိရေး၊ ဆင်းရဲမွှဲတေမှု ပပျောက်ရေး စတဲ့ လှုံဆော်လှုပ်ရှားမှုများကို လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေရင် တန္နစီပြည်နယ် (Tennessee) မန်ဖိစ်မြို့  (Memphis) ရှိ လူမဲ မြူနီစပယ်သန့်ရှင်းသမားများ ဆန္ဒပြသပိတ်မှောက်ပွဲကို သွားရောက်အားပေးထောက်ခံပြီး ၁၉၆၈ ဧပြီလ (၃) ရက်နေ့မှာ တောင်ထိပ်ပေါ်ကို ကျနော်ရောက်ခဲ့ဘူးတယ် (I have been to the mountaintop) မိန့်ခွန်းကို ပြောဆိုခဲ့တယ်။ ဒီ မိန့်ခွန်းက သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး မိန့်ခွန်းဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူမှ မျှော်လင့်မထားခဲ့ပေမယ့် သူ့ပြောဆိုချက်ထဲမှာ “ကျနော် ဒီကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ တချို့ တွေ ကျနော်ကို ခြိမ်းခြောက်ကြတယ်။ လူဖြူတချို့က ဘာဖြစ်သွားမယ် ဘာညာဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုကြတယ်။ အခုလောလောဆယ် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကတော့ ကျနော်မသိဘူး။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ရှေ့ ဆက် ခရီးကြမ်းကြီးကို ဆက်လျှောက်ရအုန်းမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် ဒိကိစ္စကို သိပ်ဂရုစိုက် အလေးမထားဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျနော် တောင်ထိပ်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးပြီ။ ကျနော်လည်း အားလုံးလိုလို ဘဝကို အသက်ရှည်ရှည် ဖြတ်သန်းချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ အသက်ရှည်နေနိုင်ရေးကို ကျနော် စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ ကျနော်အနေနဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်း လုပ်ဆောင်သွားချင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်အနေနဲ့ ကျနော်ကို တောင်ထိပ်ကိုသွားခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ တောင်ထိပ်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ငြိမ်းချမ်းသာယာတဲ့ နိုင်ငံသစ် ကို ကျနော်တွေ့ရပါတယ်။ ကျနော် ခင်များတို့နဲ့ အဲဒီနေရာကို အတူရောက်ရင် ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီည ခင်များတို့ကို ကျနော်သိစေချင်တာက ကျနော်တို့တတွေ ဒီနယ်မြေသစ်ကို ရောက်ရှိကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီအတွက် ကျနော် ဒီည အထူးဝမ်းသာပျော်ရွင်ပါတယ်။ တခြားဘာမှ စိုး ရိမ်ကြောင့်ကြမနေပါဘူး။ ဘာကိုမှလည်း မကြောက်တဲ့လူတယောက်ပါ။” ပြောဆိုခဲ့တယ်။
သူ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ စကားအရိပ်နမိတ်အတိုင်း နောက်တရက် ဧပြီလညနေပိုင်း ၆ နာရီ တမိနစ်အချိန် သူတည်းခိုရာ လော်ရိန်းမော်တယ် (Lorraine Motel) ဒုတိယထပ် လသာဆောင်မှာ ညနေစာသွားစားဖို့ လာရောက်ခေါ်မယ့်သူကိုစောင့်နေတုန်း လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူ ပစ်ခတ် လိုက်တဲ့ သေနတ်ဒဏ်ရာရရှိပြီး စိန့်ဂျိုးဆက်ဆေးရုံမှာ သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ သေဆုံးချိန်မှာ အသက် (၃၉) သာရှိသေးပေမယ့် ဆေးမှတ် တမ်းအရ သူ့ နှလုံးသားအသက်က အသက် (၆၀) ကျော် လူကြီးတယောက်အရွယ် ရှိနေတယ်။ ဒေါက်တာကင်း လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ဝါရှင်တန်ဒီစီ၊ ချီကာဂို၊ ဘော်တီမိုး မြို့များစွာမှာ ဆူပူအကြမ်းဖက်တုံ့ပြန့်မှုများ ဖြစ်ပွါးခဲ့တယ်။ ဒေါက်တာ ကင်း၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းရေးသမားများက အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြကြဖို့ကို မေတ္တာရပ်ခံကြတယ်။
ကျနော်တို့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဘုန်းကြီးသော်လည်း အသက်မရှည်ခဲ့သူ ဒေါက်တာ မာတင်လူသားကင်းကို အိန္ဒိယခေါင်းဆောင်ကြီး မဟတ္တမ ဂန္ဓီ လို အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းရေးသမားကြီးတဦး အဖြစ် အမေရိကန်ပြည်သူလူထု နဲ့ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများက ဂုဏ်ပြုကြပြီး သူတို့ရဲ့အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းရေးနည်း ဆက်လက်ရှင်သန်နေတာကို ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ယနေ့ တွေ့မြင်နိုင်သည်။
တချိန်က သူနဲ့ အကြမ်းမဖက်ငြိမ်းချမ်းရေး တိုက်ပွဲသူရဲကောင်များ၏ ကြိုးပမ်းလှုပ်ရှားမှု၊ မျှော်လင့်ချက်အိမ်မက်ကြောင့် ယနေ့ အမေရိ ကန်သမိုင်းမှာ ထင်ရှားတဲ့ လူမဲ စစ်ဦးချုပ် ကိုလင်းပိုဝေါလ် (Colin Powell)၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကွန်ဒါလီဇာရိုက်စ် (Condoleezza Rice) နဲ့ သမ္မတ ဘာရက်အိုဘားမား (Barack Obama) တို့ နိုင်ငံတော်တာဝန်၊ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူ့အကျိုးများကို တန်တူညီတူ မဲပိုင်ပေးခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်များနဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်အောက်မှာ ထမ်းရွက်ရယူနိုင်ခဲ့တာကို သမိုင်းစာမျက်နှာများပေါ်မှာ တွေ့မြင်နေရပါပြီ။ မကြာသေး ခင်ကပဲ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ရှိ ထင်ရှားတဲ့ လူဖြူခေါင်းဆောင်များကို ဂုဏ်ပြုထားတဲ့ အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အုံ၊ မော်ကွန်းရုပ်တု တွေကြားမှာ ဒေါက်တာမာတင်လူသားကင်းအား ဂုဏ်ပြုသောအထိမ်းအမှတ် ကျောက်ရုပ်တုကြီးနဲ့ ပန်းခြံကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်။
ဒီအပတ် ဒေါက်တာမာတင်လူသားကင်းမွေးနေ့အား ဂုဏ်ပြုသော ရက်ရှည်ရုံးပိတ်ရက်မှာ ပူဇာစ ပူဇနေယျာနံ – ပူဇော်ထိုက်သူ ပုဂ္ဂိုလ်မှန် တို့ကို ပူဇော်ရခြင်းသည်လည်း မင်္ဂလာမည်၏ ဆိုစကားအတိုင်း ဒီဆောင်းပါးလေးနဲ့ ပူဇော်ထိုက်သူ ကျနော်လေးစားသော အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းရေးသမားကြီး ဒေါက်တာမာတင်လူသားကင်း ဂျူနီယာကို ဂုဏ်ပြုပူဇော်လိုက်ပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ လူမဲများကို လူမဲ (black)၊ အာဖရို အမေရိကန် (Afro-American) လို့ ခေါ်ဆိုခြင်းက သင့်မြတ်ပြီး၊ အစောပိုင်း အသားအရောင် ခွဲခြား၊ ကျေးကျွန်ကာလအတွင်း နာမ်နှိမ်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ နီဂရို (Negro)၊ နစ်ဂါ (Nigger) လို့ ခေါ်ဆိုခြင်းကို ယခုအချိန်မှာ တရားဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်သည်။
အမေရိကန် လူမဲသမိုင်းနဲ့ Civil Rights လှုပ်ရှားမှုအကြောင်း ဖတ်မှတ်လေ့လာသင့်တဲ့ စာအုပ်များမှာ …
Frederick Douglass’s Narrative of the Life of Frederick Douglas
W. E. B. Du Bois’s The Souls of Black Folk
Brook T. Washington’s Up From Slavery
Martin Luther King Jr.’s Why We Can’t Wait and Stride toward Freedom
Malcolm X’s The Autobiography of Malcolm X
ဇန်န၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၂
စာရေးသူ Unknown အချိန် 8:27 PM
တံဆိပ်များ မိတ္ထူ , သမိုင်းအစအန
jasmine(တောင်ကြီး) January 20, 2012 at 1:45 AM
အဲတာဟုတ်လား---ခုပဲ (Barack Obama)တောင်
သမ္မတ ဖြစ်နေပြီပဲနော် မရှိလောက်တော့ပါဘူး
သတိုး January 20, 2012 at 7:40 AM
လေးလေးစားစား ဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ။ မျှဝေပေးတာအတွက်လည်း ကျေးဇူးပါ။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! January 20, 2012 at 1:19 PM
အရင်ကတော့လူမဲဆို နေရာမရသလောက်...ခုတော့ ဥရောပ တစ်ခွင်မှာ လူမဲတွေပဲ နေရာအပြည့်နဲ့ပါအကိုရေ...ဗဟုသုတလေးတွေနဲ့ မသိရသေးတဲ့ သမိုင်းတစ်ချို့အတွက် ကျေးဇူးပါအကို...ကောင်းသောနေ့ရက်လေး ဖြစ်ပါစေလို့..
Anonymous January 24, 2012 at 7:37 AM